Eva Bheseni Fenicha - Dhizaini magazini
Bheseni Fenicha Iko kukurudzira kwemugadziri kwakauya kubva kune mudiki dhizaini uye yekuishandisa sechinhu chakanyarara asi chinozorodza kupinda muchimbuzi chekugezera. Iyo yakabuda kubva pakutsanangurwa kwemafomu ekugadzira uye yakapusa geometric vhoriyamu. Bonde rinogona kuve rinogona kuve chinhu chinotsanangura nzvimbo dzakasiyana dzakatenderedza uye panguva imwecheteyo nzvimbo inonongedza munzvimbo. Zviri nyore kwazvo kushandisa, yakachena uye yakasimba zvakare. Pane akasiyana akasiyana anosanganisira kumira wega, kugara-pabhenji uye kumadziro kwakaiswa, pamwe chete nekunyura kana mbiri kunyura. Izvo zvakasiyana pane rumwe ruvara (RAL mavara) zvichabatsira kubatanidza dhizaini munzvimbo.
Zita rechirongwa : Eva, Vagadziri zita : iñaki leite, Izita remutengi : iñaki leite, architect.
Midziyo yemuchimbuzi yekushambidzira uye dhizaina ware dhizaini
Bheseni Fenicha iñaki leite Eva